२२ वर्ष’का युवकका तीन जना श्रीमती, तीनै जनै मिलेर खोज्दैछन् चौथी सौता ! - Nepali in Australia
June 21, 2021 autherLeaveaComment on २२ वर्ष’का युवकका तीन जना श्रीमती, तीनै जनै मिलेर खोज्दैछन् चौथी सौता !
सौता भन्ने शब्द महिलाहरु-लाई पटक्कै मन नपर्ने शब्द हो । महिलाहरु विवाहपछि घरमा धेरै दुःख सहेर बसेका उदा’हरणहरु छन् । महिलाहरु निकै सहनशील हुन्छन् तर विवा’हित महिला’ले सहनै नसक्ने कुरा हो – सौता ।उनीहरु अरु धेरै कुरा सहन सक्छन् तर आफ्नो श्रीमान:लाई अरु कसैसँग बाँड्न पटक्कै तयार हुँदैनन् ।
तर एक २२ वर्षका युवकका तीन श्रीमतीहरुले भने चौथी सौता’को खोजी गरिरहेका छन् ।गल्फ टुडेका अनुसार अदनान नामका यी पाकि:स्तानी युवकले २२ वर्षको उमेरसम्म आइ’पुग्दा तीन बिहे गरिस’केका छन् । र, अब उनका तीन श्रीमतीहरु मिलेर चौथी सौता खोज्दैछन् । उनका तीनैवटी श्रमिती उनीसँगै छन् ।
अदनानका तीन श्रीमती’हरुले उनी’माथि सबै श्रीमतीहरु:लाई पूरा समय दिन नसकेको आरोप भने लगाउँछन् तर तीनैवटीले अदनान र बच्चाहरुको ख्याल गछृन् । अदनान तीनै-जना श्रीमती:लाई प्रेम गर्छन् । उनको घरको एक महि’नाको खर्च डेढ लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ हुन्छ । तल थि’चेर भिडि’यो हेर्नुहोस्…
गुडिरहेको गाडिबाट अनौठो तरिकाले चो’री, गुड्दागुड्दैको गाडिबाट यसरि झिके बोरा (भिडियो हेर्नुस् )
बाटोमा हिँडिरहेका यि युवकले चार तलामाथि झुन्डिएका बच्चालाई ३० सेकेण्डमा आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर यसरी बचाए